Gaas oo booqasho ku tagey Sanaag
Maadaxweeynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wuxuu booqasho ku maray degmooyin iyo gobolo ka mid ah gobolka Sanaag, waxaana safarkiisa ku weheliya xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya.
Labadii cisho ee uu joogay magaaladda Badhan wuxuu xariga ka jaray jaamacadda Maakhir iyo xarun bangi, sida uu sheegay afhayeenka maamulka Puntland ahna wasiiru dowlo madaxtooyada C/laahi Maxamed Jaamac Quraanjecel.
Dhinaca kale, Soomaliland ayaa ku tilmaantay socdaalka gaas daan daansi dagaal. Somaliland iyo Puntland ayaa horey ugu diriray deegaanka Tuka- Raq ee gobolka Sool. Waxaana ay labada dhinac isku hayaan maamulka meelo ka mid ah labada gobol.
Warbixinno arrintan ku saabsan hoos ka dhageyso.